Maxaa La Gudboon Gudida Doorashooyinka Ee Saldhiga U Noqday Khilaafka Xisbiyada Siyaasada Somaliland
Khilaafkii u dhaxeeyey xisbiyada siyaasada somaliland ayaa haatan gaadhay meel kulul iyada oo laba ka mid ahi ay isla qaateen go’aano la xidhiidha qabashada doorashooyinka soo socda.
Guddida doorashooyinka somaliland ayaa haatan ah hay’adda kaliya ee caqabada ku ah qabsoomida doorashooyinka goleyaasha deegaanada dalka iyo golaha wakiilada.Khilaafka ugu weyn ee xisbiyada u dhaxeeya ayaa haatan noqday aragtida ay ka qabaan guddida doorashada, iyada oo xisbiyada Kulmiye Iyo Ucid ay qabaan in xubno lagu kordhiyo isla markaana ay komishankani qabtaan doorashooyinka soo socda halka xisbiga Waddani uu aaminsan yahay in guud ahaanba la badalo xubnaha guddida doorashada.
Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddaniayaa hore ugu gudbiyey guddida doorashada warbixin uu ku soo bandhigay dhaliilaha uu u hayo, kuwaas oo uu sheegay inay sabab u yihiin inay kalsoonida kala noqdaan xubnahan hada jooga.
Xukuumada iyo xisbigeeda Kulmiye ayaa dhinacooda u muuqda kuwo si walba ku garab taagan guddida doorashada isla markaana aan doonayn in la badalo iyaga oo doonaya in komishankani ay qabtaan doorashooyinka goleyaasha deegaanada iyo golaha wakiilada, halka xisbiga Ucid-na uu doonayo in xubno cusub lagu kordhiyo guddidan hada joogta taas oo xisbiga Kulmiye uu la qaatay balse uu Waddani wali kaga soo horjeedo.
Dhinaca kale guddida doorashooyinka ayaa ilaa hada ku guul daraystay inay iska difaacaan eedaymaha uga imanaya xisbiga mucaaridka ah ee Waddani, iyaga oo aan dhinacna iskaga leexin warbixintii uu ku dhaliilay ee uu hore u gaadhsiiyey.
Guddida doorashada ayaa haatan ah kuwo afka ka xidhay khilaafka adag ee soo kala dhex galay xisbiyada somaliland kaas oo ay sabab u yihiin, waxaanay dhawaan sheegeen in caqabad kaga timid wada shaqayn la,aanta xisbiga Waddani ay sababtay in doorashooyinkii la filayey horaanta sanadka 2019 ay dib u dhacaan.
Xisbiyada siyaasada somaliland ee isku khilaafsan guddida doorashada ayaa u muuqda kuwo aan ka soo dagayn mawqifyada kala fog ee ay taagan yihiin, taas badalkeedana ma jiraan dhaq dhaqaaqyo muujinaya in guddida doorashooyinku ay gaadhi karaan go’aan isku soo dhawaynaya labada dhinac oo ay qaadanayaan.
Guddida doorashada ayaa fursad u haysta oo kaliya inay is casilaan mar haddii aanay jirin kalsooni uu ku qabo xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Waddani, waxaana la dhawrayaa talaabada xigta go’aanka ay maanta wada gaadheen Kulmiye Iyo Ucid ee ka soo baxda khilaafka taagan iyada oo xisbiga Waddani uu dalbanayo in ergooyin ajaanib ahi dhex dhexaadin ka galaan khilaafka hada lagu sii kala fogaaday.